June 3, 2017 Nesrdin Hadji Leave a comment
Hubadhaa! Qorannoo Early Grade reading assessment (EGRA) jedhamu kan dhabbaatani gargaarsaa Ameerikaa (USAID) taasifame caasaan qubee Afaan Oromoo jijjiramuu qaba yaada jedhu gonkumaa hin kaafne. Daa’immaan Itoophiyaa sadarkaa barnoota akutaalee duraa hanqina dubbisuu hamaa akka qaban kan godhan sababoota gurguddoo tarreesse keessas rakkoon qubee hin kaayamne. Sababoonni gurguddoon kaayaman, hanqina kitaaba Afaan sanii, hanqina kitaabilee biroo ( supplementary reading), gargaarsa maatii ( maatin barachuu dhabuu) dha. ( Gabaasa san fuula E5- E7 laalaa)
Akka furmaataattis qabxiilee tarreessaman keessaa ijoon; leenjii akkaataa barattoota dubbisuu itti dana’anirratti barsiisotaaf kennuu, daa’immaan jalqabumarraa dubbisuu akka shaakalan gochuu, dhiheessiifi qulqullina kitaabbilee barnootaa fooyyeessuu, hawaasa keessa aadaan dubbisuu akka babal’atu gochuufi akkasumas maloota joolleen jechoota salphatti qayyabachuuf dandeessisu baasuu fa’a. ( gabaasa san fuula E8-E10 ilaalaa)
Qorannaan kun bakka takkattis tartiibni qubee haa jijjiramu kan jedhu ani hin agarre. Qorannoon akkanaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane Ameerikaa dabalatee biyyoota biroottis ni godhama. Biyya tartiibni qubee itti jijjirame garuu hin dhageenye; hin agarres.
Akka qorannaa kanarraa hubannutti maddi rakkoo laafina dubbisuu gudddaan qulqullinaafi dhiheessii meeshaalee banootaafi leenjii barsiisotaati. Sababni hnqinoota kanaa ammoo xiyyeeffannaafi baajatni gahaan ramadamuu dhabuu akka tahe ni beekna. Sirni Wayyaanee damee barnootaas ta’ee kan biroo irratti qulqullina irra baay’inatti ( quantity over quality) akka fuulleeffatu ni beekna. Kanas kan godhuy liqaafi gargaarsa biyya alaatii argatu keessaa harka guddaa hatuun kan hafeen karooraafi raawwii lakkoofsaan hedduu kan ammoo qulqullina hin qabneen akka owwisuufi. Tooftaan hannaa kun qulqullina barnootaa sadarkaa duraa qofatti osoo hin taane sadarkaa yunivarsitiittis baldhinaan muldhata. Tartiiba qube waljala dhayuun rakkoo bu’uraa kana haaluuf yoo taate malee furmaata hin tahu.
Kanaafuu biiroon barnoota Oromiyaa daba tartiiba qubee jallisuuf eegalame akkana battalatti dhaabee daa’immaan afaafanjjii irraa akka baraaru gaafanna. Kana ta’uu baannaan maatiifi barattoonni mirga isaanii kabajchiisuuf qabsaayuun dirqama.A
→ The Foreign Desk: Horn of Africa: a country in a state of emergency: Ethiopia. Protests have put the government under pressure and hundreds have been killed. So what’s next?
← voa afaan oromo-Akka gabaasa Yaa’ii Mirga Namaa Itoophiyaa(Semegu)tti Itoophiyaatti marsaa lamaa keesatti nama 22, 000 caalaa hidhan — OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA